Ndi saịtị gị dara? Ebe nchekwa data? | Martech Zone
Ndi saịtị gị dara? Ebe nchekwa data?
Tọzdee, Eprel 24, 2008 Wednesday, October 29, 2014 Douglas Karr
Ị maara? Kedụ maka nchekwa data gị? Ndi ngalaba gi na edozi? Ọ bụ saịtị gị na ibe gị ka ị na-arụ ọrụ njehie nchekwa data?
Anyị nwere ihe atụ izu ole na ole gara aga ebe saịtị anyị na-arụ ọrụ nke ọma, mana anyị na-agbagha nsogbu na ọnụọgụ nke njikọ data. O di nwute, anyi choputara site n'aka onye ahia na enweghi obi uto igwa anyi. Ọ ghọtaghị ihe kpatara ọ ga - eji mee ka anyị mata - ọ bụ eziokwu!
Ndị bu m ụzọ emeela ihe ziri ezi wee banye na ọrụ nlekota. Ọ bụ a pụtara pricey ọrụ na $ 49.95 kwa ọnwa. Mgbe m bara, atụfuru m ozugbo na m na-achọ ụzọ m ga - emecha wee chọpụta na anyị na - edozigharị ihu akwụkwọ anyị. Anyị anaghị anwale maka asambodo SSL, anyị anaghị anwale subdomains anyị, anyị anaghị elele ma nchekwa data ahụ na-aza ma ọ bụ na ọ bụghị.
Amalitere m ngwa ngwa tinye nlele ọzọ ma wepu oge site na nkeji 5 ruo oge nkeji 1. Mgbe m pịrị idenye 'elekere' ọhụụ, ọ tụrụ m n'anya ịhụ na a ga-ebo m ụgwọ ntọala $ 99 na $ 49.95 ọzọ kwa ọnwa. Nke ahụ ziri ezi - ụgwọ ntọala $ 99 maka ihe m guzobere !!! M wee pụọ ma malite ịchọ ọrụ ọhụrụ.
M mụtara na Twitter (my nyocha ọhụụ) na ezigbo enyi, Ade Olonoh of Ọrụ Ntughari, bịara napụta. (More ịde blọgụ - obere twittering Ade!)
Ade biako ne sɛ Pingdom. Pingdom nwere interface dị oke egwu yana ezigbo atụmatụ. Emere m mmemme ụfọdụ API na-akpọ maka ngwa anyị iji hụ na nchekwa data na-agba ọsọ ma m setịpụrụ Pingdom iji nyefee oku ma lelee nzaghachi.
Ọrụ a nwekwara ezi uche. Ihe bụ isi bụ $ 9.95 / mo ma na-enye ohere nyocha 5, ozi SMS iri abụọ, email na-akparaghị ókè, oge na oge ị na-ebu akụkọ, na-achọpụta ego na nkeji ọ bụla, HTTP, HTTPS, TCP, Ping na UDP checks, wdg. Ọrụ azụmahịa na-enye ohere 20 ego na 30 SMS ozi. Ha nwekwara ike siri ike API ọ bụrụ n'ịchọrọ iwebata nlekota gị.
Sava nyocha dị na Dallas, Berkeley, Amsterdam, Vasteras, na Ọgụgụ. Ana m agbalị ịchọpụta ma Ekwadoro m na Pingdom na anyị nwere ike ịgafe SMS site na ịwupụta ndepụta email nke adreesị ozi-e SMS maka ekwentị mkpara anyị.
Ederekwa m ụlọ ọrụ ahụ na arịrịọ atụmatụ. Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na, ewezuga ozi ịntanetị na SMS, ha kwere ka arịrịọ HTTP. Nke a ga - enyere m aka nyochaa otu n’ime ndị na - ere ahịa nke atọ nke na - enwe nsogbu n’oge na - adịbeghị anya. Ọ bụrụ na m nwere ike ịnwe Pingdom na-arịọ arịrịọ na sava m, enwere m ike ịgbanwe ọrụ anyị na nkwado ndabere. Ozugbo usoro ahụ bịaghachiri, enwere m ike ịgbanwe ya. Enwere m ike ime nke a site na email; ma, igbu oge nwere ike ịta anyị ahụhụ.
Anyi nwere agugu ubochi 29 ikpe. Ọ bụrụhaala na anyị ahụghị nsogbu ọ bụla, anyị ga-awụlikwa elu na ngwugwu bụ isi. Nanị nke ahụ ga-azọpụta anyị ego ole na ole ma nye anyị nlekota saịtị zuru ezu karị!
OSX Bug: Adalata onyonyo na 16 Terabytes?
More na BlogIN, a Video
Apr 24, 2008 na 11: 12 PM
O juru m anya na ọnụahịa nke ụfọdụ ọrụ nlekota na ụgwọ ha na-akwụ. Pingdom dị ka ezigbo ọrụ. Ebiri m na AlertBot (ihe dị otu ọnụahịa ahụ) ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ gara aga ma enwere m obi ụtọ na ọrụ ha. Ebe ọ bụ na ị na-eme ntọala ahụ n'onwe gị na ihe ọ bụla ọzọ bụ akpaka site na ebe ahụ, $ 50 kwa ọnwa kwesịrị ịzụta nnukwu nkata ọrụ.
Ana m achọ ụfọdụ n'ime ọrụ nlekota ndị a ịgụnye interface Twitter maka ọkwa na nso nso. Iji Twitter ka ọnụọgụgụ mmadụ ọ bụla nwere ike "soro" ihe ngosipụta ga - abụ ikike magburu onwe ya, n'uche m.
Apr 25, 2008 na 6: 06 AM
Daalụ maka nyocha ngwaahịa ahụ Doug. Biko mee ka m mara ka ihe si aga na ngwụcha ụbọchị iri atọ. Nke ahụ bụ maka mgbe anyị na-eme atụmatụ itinye nyocha anyị.
Apr 25, 2008 na 9: 24 AM
Nnukwu nyocha Doug. Ma ị nwụọla na naanị ịlele ọnọdụ ọdụ ụgbọ mmiri HTTP ezughị.
Anyị na Pingdom ejirila Sdị FormSpring ruo ihe karịrị otu afọ ma nwee obi ụtọ na ọrụ ahụ.
Anyị na-edozi nyocha yiri nke a - emeela ihe nyocha iri na abụọ megide ngwa ahụ na-eji API anyị (dịka, enwere ike ịdebe akwụkwọ, anyị nwere ike ịhụ data echere na nchekwa data, wdg) wee wepụta PASS ma ọ bụ KWES statusR status ọnọdụ na faịlụ . Mgbe ahụ Pingdom na-enyocha faịlụ ahụ site na HTTP iji jide n'aka na ozi ahụ kwuru PASS, ihe ngosi ndị ọzọ na-aga dị ka onye nzuzu.
Apr 29, 2008 na 10: 23 PM
Naanị m chọrọ iwebata ọrụ 2 ọzọ - n'efu onye.itor.us na adịchaghị mma ọrụ nlekota oru. Otu ha uru i nwere ike ikpokọta mpụga peeji nke ibu nlekota oru na usoro akụ nlekota na-amara gị ọkwa banyere ala usoro akụ. Mgbe ahụ ị ga - eme ihe n'eziokwu ọ bụghị naanị na - edozi ma na - egbochi ọdịda. Nye ya nwaa!
Apr 30, 2008 na 7: 57 AM
Ihe ndị ahụ bụ nhọrọ m nwere n'ezie na akaụntụ mon.itor.us. Agbanyeghị, ojiji nke Pingdom dịka ngwa dị mfe. Enweghị m ike ịchọpụta otu esi eme ụfọdụ ndenye ego site na iji mon.itor.us. Ọ na-egosi monitis na-ahazi n'otu aka ahụ.